Évora मा के हेर्ने यात्रा समाचार
पोर्चुगल यो सानो र सुन्दर देश हो त्यसैले हामी यसको केहि कुनामा भेट्न जारी राख्छौं। आज यो पालो छ भोवरा, एक शहर जुन चयन समूहको हिस्सा हो: यो हो युरोपको सब भन्दा पुरानो शहर मध्ये एक।
इभोराको ऐतिहासिक केन्द्र छ विश्व सम्पदा १ 1986 XNUMX देखि, त्यसोभए तपाइँले यस गर्मीमा हिंड्ने निर्णय गर्नुभयो भने तपाइँले के खोजिरहनु भएको छ भन्ने धारणा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले के सोच्नुहुन्छ यदि हामी हेर्छौं Évora मा के हेर्ने?
50०,००० भन्दा बढी बासिन्दाहरूको यो सानो शहर कहाँ छ? यो भेटियो Alentejo क्षेत्रमा, देशको दक्षिण मध्य क्षेत्र मा, एक क्षेत्र भूमध्य जलवायु यसले अनुमति दिन्छ, उदाहरणका लागि, कर्क ओकको खेती, कर्क उत्पादन गर्ने रूख। पोर्तुगल, खैर, विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो र 70०% जस्तो केहि लिन्छ।
भोवरा यो पोर्टोबाट 300०० किलोमिटर मात्र र लिस्बनबाट मात्र १ 132२ किलोमिटरमा छ, देश को राजधानी। यदि तपाईं स्पेनिश पक्षमा हुनुहुन्छ भने, यो सेभिलबाट २ 290 ० किलोमिटर र म्याड्रिडबाट 500०० किलोमिटर टाढा छ। त्यहाँ पुग्न गाह्रो छैन र यसको स्थानको कारण यो हो कि यसको इतिहासमा धेरै शताब्दीहरू छन्। ती शताब्दीहरू, ठ्याक्कै, त्यत्ति धेरै उहाँलाई प्रदान गरेको छ सांस्कृतिक खजाना, दुबै रोमन र मध्ययुगीन।
रोमन समयमा, उदाहरण को लागी, यो एक महान वृद्धि र शहरी सुधार थियो जो जीवित रहन्छ रोमन मन्दिर सम्भवतः सम्राट र सामान्यको भग्नावशेषलाई समर्पित पुरानो सार्वजनिक शौचालय। साथै, तपाईं एकको अवशेषहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रोमन गाउँआज पेरिस भित्र। दुःखको कुरा, ती टाढा बर्षको महिमाबाट यो केवल चीज बाँकी छ। पछि भिसीगोथ र मोरीश समय आयो जसले उनीहरूको ट्रेस पनि छोडे।
रोमीहरूदेखि तपाईं मन्दिरको भग्नावशेषहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन १ शताब्दीदेखि शहरको बीचमा रहेको प्लाजा कोन्डे भिला फ्लोरमा नै रहेको छ। स्तम्भहरूको हडताल समूहले तपाईंलाई कुन मन्दिरको दृश्य हेर्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ तेस्रो शताब्दीका स्नान वा नुहाउने ठाउँहरू पनि छन् र पुरानो पर्खालका केही अंशहरू, जसको मध्यकालीन र पछि भित्तासँग कुनै सरोकार छैन।
यस प्रकार, रोमन भग्नावशेषमा मुस्लिमहरूले, उदाहरणका लागि, आकार दिए मस्जिद र पनि अल्काजार। जब मुस्लिमहरुलाई निष्कासन गरियो भने विकासको अर्को चरण शुरु भयो र मध्ययुगीन भवनहरू जुन हामी आज देख्छौं त्यहाँ देखा पर्न थाले: यो इभोराको क्याथेड्रल, टाउन हल र भव्य दरबारहरूको समूह। हेरौं:
भोभाराको क्याथेड्रल भनिन्छ हाम्रो ग्रहण को लेडी को क्याथेड्रल बेसिलिका र यसको निर्माण शहर ११ ofqu मा पुनः कब्जा पछि सुरु भयो। यो बीचमा एक भवन हो रोमान्स्क र गोथिक शैली शताब्दियौंदेखि धेरै परिवर्तनहरू भएको छ। फेडेड १ pink औं शताब्दीदेखि प्रेषितहरूको संगमरमरको मूर्तिले मुकुट लगाएको, आन्तरिक भागमा उज्यालो ल्याउने गार्थिक विन्डो, र एक अग्लो स्पायरसहित गुलाबी ग्रेनाइटले बनेको छ।
मन्दिर एक ल्याटिन क्रसको आकारमा छ, तीन नभाहरू र माथिल्लो फ्लोरको साथ जुन सुन्दर घुमाउरो सीढीले पहुँच गरेको छ र जसबाट दृश्यहरू स्टुपेन्डस छन्। यो परी कथाबाट बाहिर केही देखिन्छ। अर्को धार्मिक भवन हो इग्लेसिया डे स्यान फ्रांसिस्को, गोथिक-मनुएलिन शैलीमा, १ XNUMX औं र १ XNUMX औं शताब्दीदेखि नै। भनिन्छ कि यो चर्च देशको सान फ्रान्सिस्कोको अर्डरको पहिलो घर थियो।
चर्चको बाउमेन्ट्स र टावरहरू छन् र भित्र पट्टि गिल्डेड वेपिडपीस र सुन्दर स्टुको वर्कका साथ छेउछाउका चैपलहरू छन्। मुख्य चैपलमा आज एउटा मार्बल वेदीपीस छ र बिभिन्न चैपलहरूमा तपाईले अन्य खजाना देख्नुहुनेछ। तपाईं कल भ्रमण नगरी छोड्न सक्नुहुन्न हड्डीहरूको चैपल, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित, भिक्षुद्वारा निर्मित जो जीवन अल्पकालिक छ भनेर व्यक्त गर्न चाहने (हामी यहाँ हड्डीहरू छौं, हामी तपाईंको प्रतीक्षा गर्छौं, ऊ त्यहाँ भन्छ, थोरै उदास)। स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ जताततै हड्डीहरू छन्।
यस सम्बन्धमा स्थानीय कुलीन वर्ग लाई बढावा दिन्छ डॉन मनुएल प्यालेस वा सान फ्रान्सिस्कोको पुरानो शाही महल, अल्फोन्सो भि द्वारा निर्मित थियो तर १ th औं शताब्दीको अन्त्यसम्म यसलाई नष्ट नभएसम्म धेरै राजाले त्यहाँ बसोबास गरे। यस्तो देखिन्छ कि यो पूरै दरबार नै हो तर आज त्यहाँ कल मात्र छ महिला ग्यालरी, मनुएलिन शैली: एक आयताकार भवन, टाइल कोठा र फलामको बाल्कनी, दुई तले टावर र मुडेजर शैली कोठा सहित।
यो त्यहाँ थियो जहाँ वास्को दा गामा भारतको समुद्री मार्गको खोजीमा फ्लीट कमाण्ड गर्न सहमत भए। अर्को दरबार छ Cadava का ड्युक्स को महलl, त्यहाँ पनि छ बास्टोको गणनाको दरबार र राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू सबै सार्वजनिक छन् किनकि तिनीहरू संग्रहालयहरूमा परिणत भएका छन्। भभोरको अर्को कुनामा हो Agua de Prata एकेडक्ट १9औं शताब्दीबाट र त्यसले प्रभावशाली kilometers किलोमिटर कभर गर्दछ।
धेरै पछि पछाडि जानुहुँदा तपाईं वरिपरि घुम्न र जान्न पनि सक्नुहुन्छ मेनहिर डे लॉस अल्मेन्ड्रेस वा क्रमेलेक डे लॉस अल्मेन्ड्रेस, दुबै सदस्यहरू भोवरा मेगालिथिक सर्किट। सवारीलाई नछोड्नुहोस् भवोर संग्रहालय, यसको कला र शहरको पुरातात्विक संग्रह वा युजानियो डे अल्मेडा फाउन्डेशनको धेरै रोचक फोरमको साथ। अर्कोतर्फ म्यूजियो डे आर्ट स्याक्रो क्याथेड्रल आफैले, को क्यारेज संग्रहालय वा परम्परागत कला केन्द्र।
भोभारा र एलेन्तेजो माटो, कर्क, छाला, फलाम वा सि horn, टाइलहरू, माटाका भाँडाहरू, कढ़ाई वा टेपेस्ट्रीजका भाँडाका विशेषताहरूले हुन्। त्यसोभए तपाईं यी सबै कुरा त्यो केन्द्रमा, पसलहरूमा र शिल्प तथा डिजाइन संग्रहालयमा देख्न सक्नुहुनेछ।
अन्तमा, पछाडि जानु भन्दा पहिले, किन तपाई एक बनाउँदैन तातो हवा उडान सवारी, प्रकृति को माध्यम बाट पैदल वा सुन्दर माध्यम बाट पैदल इभोरा सार्वजनिक बगीचा विचार गर्न इभोराको पर्खाल फूलको रंग अन्तर्गत?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » पोर्चुगल » Évora मा के हेर्ने